Inona avy ireo haben'ny doka finday CTR avo indrindra sy ambony latabatra? | Martech Zone
Alarobia 12, 2020 Alarobia 12, 2020 Rasheed Ahamed
Ho an'ny mpivarotra dia loharanom-pahalalana azo antoka amin'ny fahazoana mpanjifa hatrany ny doka misy karama. Na dia mety miovaova aza ny fomba fampiasan'ny orinasa dokam-barotra arahin'antoka - ny sasany mampiasa doka amin'ny famerenanana indray, ny sasany ho fampahafantarana ny marika, ary ny sasany ho an'ny fahazoana azy manokana - ny tsirairay amintsika dia tokony hiditra amin'izany.
Ary, noho ny fahajamban'ny sora-baventy / fahajamban'ny doka, tsy mora ny misarika ny sain'ny mpampiasa amin'ny doka an-tsary ary avy eo asaivo mandray ny hetsika tadiavina izy ireo. Midika izany, amin'ny lafiny iray, dia mila manandrana zavatra be dia be ianao hahafantarana izay maneno amin'ny mpihaino kendrenao. Etsy ankilany, mila mibanjina ny ROAS (Fandaniana amin'ny fandaniana amin'ny doka) ianao. ROAS afaka mitifitra raha be loatra ny fanandramana. Ohatra, alaivo sary an-tsaina ny fandaniana vola be hanamboarana ny iray amin'ireo variable marobe amin'ny lalao (fandefasana hafatra, famolavolana sns).
Indrindra, amin'ny krizy, zava-dehibe ny mahatakatra ny fomba hampitomboana ny fiverenana nefa mitazona ny fandaniana doka amin'ny ambaratonga tsara indrindra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanampy anao izahay hisafidy ny haben'ny doka mifanaraka amin'ny tanjon'ny fampielezan-kevitrao. Ny fandehanana amin'ny haben'ny doka tsara indrindra dia afaka manatsara ny fahitana ny doka, CTR, ary amin'izany, ny tahan'ny fiovam-po. Andao hiroboka.
Ao amin'ny Automatad, izahay nianatra maherin'ny 2 miliara ny doka amin'ny dokam-barotra an-jatony raha te hahalala ny fizarana haben'ny doka (amin'ny%), ny vidin'ny fividianana azy ireo, inona ny CTR, sy maro hafa. Amin'ireto data ireto dia hahafahantsika mamantatra ny haben'ny doka tsara indrindra ampiasaina arakaraka ny tanjonao.
Fanentanana momba ny fanentanana amin'ny marika
Ho an'ny fampielezana fanentanana amin'ny marika dia mila manatratra mpampiasa bebe kokoa ianao. Arakaraka ny hahatratrarana azy no hahitana vokatra tsara kokoa. Noho izany dia mila mahazo antoka ianao fa ny famoronana anao dia amin'ny haben'ny fangatahana indrindra.
Ny haben'ny doka finday tsara indrindra - Na dia betsaka aza izany habe sy endrika endrika doka finday misy, haben'ny doka roa fotsiny no mitahiry ny ankamaroan'ny fahatsapana doka amin'ny fitaovana finday - 320 × 50 sy 300 × 250. 320 × 50, fantatra koa amin'ny hoe, leaderboard finday irery no maka sary manakaiky ny 50% amin'ny seho fampisehoana rehetra atolotra amin'ny alàlan'ny finday. Ary, 300 × 250 na mahitsizoro antonony dia mahazo ~ 40 isan-jato. Raha tsorina, amin'ny fifantohana amin'ny haben'ny doka iray na roa fotsiny, dia afaka manatona mpihaino marobe amin'ny tranonkala misokatra ianao.
Haben'ny doka (natolotra) % amin'ny vola miditra rehetra
Ny haben'ny doka Desktop tsara indrindra - Raha momba ny birao dia mila mampiasa ny famoronana doka lehibe kokoa ianao. Ohatra, ny 728 × 90 (takelaka birao) dia mitazona ny fahatsapana betsaka indrindra. Etsy akaikiny ilay doka mitsivalana 160 × 600. Satria samy manana fahitana ambony kokoa ny takelaka misy ny birao sy ny doka mitsangana, dia tsara kokoa raha ampiasaina amin'ny fampielezan-kevitra momba ny marika.
Fanentanana amin'ny marketing amin'ny fahombiazana
Mifanohitra amin'izany no kendrena, ny fampielezan-kevitra amin'ny fampisehoana dia ny hahazoana fivoarana betsaka araka izay tratra. Na fisoratana anarana amin'ny mailaka, fametrahana app na fanolorana form form, ianao dia mazàna manatsara ny fiovam-po. Noho izany, amin'ity tranga ity, tsara kokoa ny mampiasa ny habe amin'ny CTR avo ho an'ny famoronana doka.
Ny haben'ny doka finday tsara indrindra - Araka ny efa hitantsika fa ny ankamaroan'ny fahatsapana finday dia voasambotry ny doka roa ihany, tsara kokoa ny miaraka aminy. Na dia misy habe doka hafa misy CTR tsara kokoa aza - 336 × 280, ohatra - ny ankamaroan'ny tranonkala dia mazàna misoroka ireo singa lehibe kokoa noho izy io mety hanakorontana ny zavatra niainan'ny mpampiasa. Noho izany, mety tsy ho afaka mamoaka fahatsapana maro ianao araka ny drafitra rehetra.
Ny haben'ny doka Desktop tsara indrindra - Raha resaka birao dia manana habe doka maro hanaovana andrana ianao. Fa tsara kokoa ny mampiasa ny habe izay manana CTR avo sy be fangatahana (tranonkala maro kokoa no manaiky ny habeny). Noho izany, 300 × 600 no tsara indrindra raha samy mandinika ny CTR sy ny fangatahana isika. Ny manaraka tsara indrindra dia, 160 × 600. Raha tsy mitady tanjona lehibe kokoa ianao dia afaka mandeha 970 × 250 satria manana CTR avo indrindra amin'ny birao.
Sintomy ny fandinihana haben'ny doka feno
Tags: automatadFNThaben'ny doka biraomanatsara ctrhaben'ny doka findayvarotra fampisehoana
Rasheed Ahamed dia miasa amin'ny fitarihana ny fitomboan'ny zavamananaina ao Automatad, Inc. Automatad dia vokatra haino aman-jery nomerika Co, izay manome andiana vahaolana monetization programmatic izay mitarika fahombiazana sy fanangonam-bola avo lenta amin'ny ambaratonga. Ny fampiasana ny mpampanonta nomerika anay dia afaka mamorona, manome vola ary manatsara ny traikefa amin'ny doka tsara indrindra.